နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Creating bootable USB (2)
ကျနော်တို့အနေဖြင့် ယခုအခါမှာ Operating System တွေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်အောင်နဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် ပိုပြီးတော့လဲ Portable ဖြစ်ရအောင် ဒီဆော့ဝဲတွေသုံးပြီး မိမိတို့ရဲ့  USB Thumbnail Drive တွေကို ထိထိရောက်အသုံးပြုကြရအောင်ဗျာ... ကျနော်တို့ Ubuntu ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Windows ပဲဖြစ်ဖြစ် USB Thumbnail Drive ထဲကို ထည့်သွင်းတဲ့ အခါမှာ နည်းလမ်းအမျိုးမျုိးရှိပါတယ် ...ကျနော်အနေနဲ့ လောလောဆယ်သုံးလို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၃)မျိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..အရင်လဲတင်ပေးဖူးပါတယ်.....အခုကတော့နောက်ထပ် မတူတာတွေပေါ့ဗျာ..
(၁) Universal USB Installer (UUI)
(၂) YUMI – Multiboot USB Creator (Windows)
(၃) Ubuntu OS မှ Startup Disk Creator တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်...
ဒီသုံးမျိုးစလုံးဟာ အသုံးပြုရလွယ်ကူတာကြောင့်ကျနော်အနေနဲ့ Screenshot တွေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ YUMI – Multiboot USB Creator (Windows) ပါ။
That's it! When the process completes, you'll be ready to restart your computer and begin installing your OS.
Labels: Portable USB